New Calvin Klein Campaign မှာ ပါဝင်ကြနေတဲ့ နာမည်ကျော် အနုပညာရှင်များ – FemaleWear.net
New Calvin Klein Campaign မှာ ပါဝင်ကြနေတဲ့ နာမည်ကျော် အနုပညာရှင်များ
ဒီနှစ်ရဲ့ Calvin Klein Campaign မှာ ပါဝင်ရိုက်ကူးနေကြတဲ့ သူတွေကတော့ အစပိုင်းမှာ Kylie Jenner တို့ညီမတစ်တွေနဲ့ ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုနောက်ပိုင်းမှာ ဆယ်ကျော်သက်အနုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ Millie Bobby Brown, Paris Jackson နဲ့ Lulu Tenney တို့ champaign အသစ်ကို ရိုက်ကူးခဲ့တာကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပါဝင်ကြတဲ့ model တွေကွဲပြားသွားပေမယ့် ရိုက်ကူးတဲ့နေရာ location နဲ့ ဒီဇိုင်းတွေကတော့ တူညီပါတယ်။ ဒါဆို သူတို့တွေရဲ့ Campaign ပုံတွေကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
A post shared by Paris-Michael K. Jackalope (@parisjackson) on Mar 5, 2018 at 4:37pm PST
CALVIN KLEIN JEANS campaign with my gals @parisjackson @milliebobbybrown ???❣ by @willyvanderperre. #MYCALVINS #ad
A post shared by Lulu Tenney (@iamlulu_nyc) on Feb 22, 2018 at 7:16am PST